यसरी हुन्छ टिकटक अकाउन्ट ‘फ्रिज’, समाधान कसरी गर्ने ? - Khabar Center
यसरी हुन्छ टिकटक अकाउन्ट ‘फ्रिज’, समाधान कसरी गर्ने ?
अब टिकटक तीन मिनेटसम्म बनाउन सकिने !
प्रकाशित मिति :मंसिर ५ २०७८ आइतवार - १३:२२:२१ बजे
तपाईंको पासवर्ड ह्याक त भएको छैन ? यस्तो छ पत्ता लगाउने सजिलो तरिका